Barashada Naxwaha Af Soomaaliga : Cabdalla C Mansuur : 9780993431395 : Peter Books : Libros
Daabacadda 2aad ee buuggan, oo la sii tifaftiray waxna lagu kordhiyay, ujaaddadiisu waxay tahay in uu sharraxaad ballaaran ka bixiyo waxyaabaha gundhigga u ah naxwaha guud ee uu af yeelan karo, gaar ahaanna af Soomaaliga. Qayb walba ee ka mid ah naxwahana waxaa raacsan layliyo fududaynaya fahamkeeda.
Qaybta dambe ee buugga ayaana ku qoran furaha layliyada. Buuggaan waxaa looga talaggalay ardayda dugsiyada sare iyo macalliimiinta af Soomaaliga dhigta; waxaana ka faa’daysan kara dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo ciddii kale danaynaysa in ay wax ka ogaadaan naxwa af Soomaaliga.
Intaas ka sokow, buuggani wuxuu waxtar u yeelan karaa cidda baranayasa cilmi-afeedka ama dadyowga Soomaaliyeed ee doonaya koruqaadidda barashada afkooda iyo dhaqankooda.